Izindaba - Imakethe ye-trigger sprayer izobuka amathuba amahle okukhula kuso sonke isikhathi sokuhlola sika-2021-2031 ngemuva kokufinyelela okukhulayo kwesicelo ngenxa yezindawo zabo ezibanzi.
Ukuqwashisa okwandayo mayelana nokwamukelwa kwezifutho ze-trigger emisebenzini ehlukahlukene kuzobonakala kuyisithako esibalulekile sokukhula ngesikhathi sokubikezela sika-2021-2031.
Izifutho ze-trigger zisetshenziselwa ukufafaza izinhlobo ezahlukene zoketshezi. Ngokuvamile zenziwe ngepulasitiki ye-polypropylene (PP). I-trigger lever, lapho idonswa iholela ekusebenzeni kwepompo encane, ehlanganiswe neshubhu lepulasitiki. Ukunyakaza kokukhipha okubangelwa ukudonsa kwe-lever kuphoqa uketshezi ukuthi luphume njengesistimu yendlela eyodwa. Izifutho ze-trigger ziyalungiseka futhi zenza amakhasimende akwazi ukulungisa uhlobo lwesifutho njengesiqinile noma inkungu encane. Lezi zinto zisiza ekwandiseni imali engenayo kuyo yonke imakethe ye-trigger sprayer.
Imakethe ye-trigger sprayer ilinganiselwa ukuthi izokhula ku-CAGR engu- ~ 4% ngesikhathi sokubusa kuka-2021-2031 ngokusho kokuhlaziywa kwethimba le-Transparency Market Research (TMR). Imakethe ye-trigger sprayer yomhlaba wonke yalinganiselwa ezigidini ezingaphezu kwama-US $ 500 ngo-2020 futhi yengezwe ukuthi yeqe inani lama-US $ 800 wezigidi ekupheleni kwesikhathi sokubikezela, okungukuthi, ngo-2031.
Abakhiqizi emakethe ye-trigger sprayer beza nemiklamo emisha nokwenza ngokwezifiso ukukhulisa imali yabo engenayo. Bagxile kakhulu ocwaningweni nasekuthuthukiseni imisebenzi efanayo. Ukusetshenziswa okwandayo kwezifutho ze-trigger zokukhuculula indle ngesikhathi sodlame lwe-COVID-19 kuzosebenza njengesikhuthazo esibalulekile sokukhula kwemakethe ye-trigger sprayer.
Hlola amakhasi angu-135 ocwaningo oluhle kakhulu, isimo semakethe samanje, kanye nokuqagela okubanzi kwendawo. Thola imininingwane ngeMakethe ye-Trigger Sprayer (Uhlobo: Izifutho ezijwayelekile ze-Trigger kanye ne-Chemical-resistant Trigger Sprayers; Usayizi Wentamo: 28/400, 28/410, 20/410, 24/410, nokunye; Isicelo: Izimonyo Nokunakekelwa Komuntu Siqu, Ukudla Iziphuzo, Ukuhlanza & Imikhiqizo Yokubulala Amagciwane, Ukunakekelwa Okuzenzakalelayo, Imikhiqizo Yengadi, nokunye; kanye Nesiteshi Sokusabalalisa: Ku-inthanethi Nokungaxhunyiwe ku-inthanethi) - Ukuhlaziywa Kwemboni Yomhlaba Wonke, Ubukhulu, Ukwabelana, Ukukhula, Okuthrendayo, kanye Nesibikezelo, 2021-2031 Ekusungulweni Kwezinto Ezintsha kanye Noveli Yemikhiqizo Ukuze Usebenze Njengeziphindaphinda Zokukhula.
Ngokukhula kwesidingo sezifutho ze-trigger, abadlali banake ukwethula imikhiqizo emisha enenzuzo kakhulu futhi elula kubasebenzisi bokugcina. Izifutho ze-trigger eziguquguqukayo eziklanywe i-PIVOT ziyisibonelo sakudala. I-trigger sprayer eklanywe i-PIVOT inesifafazi se-trigger esinelungelo lobunikazi esinehinge engu-180 degree pivoting phakathi kwebhodlela nesibambo. Ingatshekiswa kunoma iyiphi indlela. Intuthuko enjalo eyenziwa ngabadlali emakethe ye-trigger sprayer isiza ekwenyuseni izinga lokukhula ngezinga elikhulu.
Hlaziya ukukhula kwemakethe ye-trigger sprayer emazweni angu-30+ ahlanganisa i-US, Canada, Germany, United Kingdom, France, Italy, Russia, Poland, Benelux, Nordic, China, Japan, India, and South Korea. Cela isampula yocwaningo
Imboni Yezimonyo Ukuhlwanyela Imbewu Yokukhula kuyo yonke i-Trigger Sprayer Market
Isidingo sezifutho ze-trigger embonini yezimonyo sikhule ngendlela emangalisayo ngenxa yezinzuzo ezinkulu ezinikezayo. Izifutho zehlisa ukumoshwa kwemikhiqizo yezimonyo. Abakhiqizi emakethe ye-trigger sprayer futhi bathuthukisa izifutho ezenziwe ngokwezifiso ngokuya ngesidingo somsebenzisi wokugcina, okungeza futhi izinkanyezi zokukhula.
Ukwanda kokusetshenziswa kwezimonyo ngenxa yokwanda kokuqwashisa ngokubaluleka kokuzethula ngaphambi kwabanye kuzosebenza njengesisheshisi sokukhula kwemakethe ye-trigger sprayer.
Umqedazwe we-COVID-19 wonakalise amathuba okukhula kuyo yonke imakethe ye-trigger sprayer ngezinga elikhulu. Ukuphoqelelwa kwemikhawulo yokukhiya kanye nokuvalwa kwezindawo zokukhiqiza kuholele ekulahlekelweni okukhulu. Kodwa-ke, ukusetshenziswa kwe-trigger sprayer ngezinhloso zokukhucululwa kwendle kuguqula amatafula okukhula. Ukuvimbela ukusakazeka kwe-COVID-19, kuphakanyiswa ukuthi zonke izakhiwo zigcinwe zihlanzekile, ikakhulukazi izindawo zomphakathi. Lesi sici sikhulise isidingo sezifutho ze-trigger, ezizosiza ekugcineni ekuqhubekiseni amathemba okukhula.